Ukwahlukana Phakathi kweParameters kunye nezibalo
Kwiinkalo ezininzi, injongo kukufunda iqela elikhulu labantu. La maqela ayenokuba ahlukeneyo njengeentlobo zeentaka, ama-freshmen asekholejini ase-US okanye iimoto eziqhutywe ngeenxa zonke kwihlabathi. Izibalo zisetyenziswe kuzo zonke ezi zifundo xa zingenakwenzeka okanye zingenakwenzeka ukufundisisa ngalinye ngalinye ilungu leqela elinomdla. Esikhundleni sokulinganisa amaphiko eentaka zonke zeentlobo zezilwanyana, kubuza imibuzo yocwaningo kuyo yonke iikholeji yasekholejini, okanye ukulinganisa uqoqosho lwezinto zonke imoto kwihlabathi, kunoko sifundisisa kwaye silinganise i-subset yeqela.
Ukuqokelela wonke umntu okanye yonke into eya kuhlaziywa kwisifundo ibizwa ngokuba ngumntu. Njengoko sibonile kwimimiselo engentla, uluntu lungaba lukhulu ngobukhulu. Kukho izigidi okanye iibhiliyoni zabantu ngabemi. Kodwa asimele sicinge ukuba uluntu kufuneka lube lukhulu. Ukuba iqela lethu lifundiswa ngabaphathi beesine kwisikolo esikhethekileyo, ngoko ke uluntu luququze kuphela lwaba bafundi. Ngokuxhomekeke kubukhulu be sikolo, oku kungaba ngabafundi abangaphantsi kwekhulu.
Ukwenza isifundo sethu singabizi kakhulu ngokwexesha kunye nezibonelelo, sifunda kuphela i-subset yabemi. Le ssetekethi ibizwa ngokuba isampuli . Iisampuli zingaba zikhulu okanye zincinci. Ngokwicatshulwa, umntu omnye kubemi unesampula. Uninzi lwezicelo zamanani zifuna ukuba isampuli sinabantu abangama-30.
Iiparameters kunye nezibalo
Oko sikukho emva kokufunda kwisiparitha.
Ipharamitha yintengo yenani elithetha into malunga nabantu bonke abafundiswayo. Ngokomzekelo, sinokufuna ukwazi i-wings wingspan ye-ukhozi yaseMerika. Le parameter kuba ichaza bonke abantu.
Iiparameters zinzima ukuba akunakwenzeka ukufumana ngokuthe ngqo.
Ngakolunye uhlangothi, nganye iparamitha ine-statistic ehambelana nayo enokulinganiswa. I-statistic yinani lamanani elithetha okuthile malunga nesampuli. Ukwandisa umzekelo ongentla, sinokubamba ama-eagles angama-100 kwaye silinganise amaphiko enxalenye nganye. Iintsikelelo zamaphiko ezinama-100 eagles esizibambayo zibalo.
Ixabiso leparameter liyinombolo echanekileyo. Ngokuchasene nale nto, ekubeni i-statistic ixhomekeke kwisampuli, ixabiso le-statistic lingahluka ukusuka kwisampula ukuya kwisampuli. Masithi i-parameter yesibalo sabantu sinenani, singaziwa, eli-10. Isampuli enye yobukhulu 50 ine-statistic ehambelana nexabiso 9.5. Enye isampula yobukhulu 50 ukusuka kwindoda efanayo inenani elifanayo nexabiso 11.1.
Injongo ephambili kwintsimi yeenkalo-manani kukuqikelela iparameter yoluntu ngokusetyenziswa kwamanani esampula.
Kukho indlela elula kwaye eqondekileyo yokukhumbula ukuba iiparameter kunye nanibalo zilinganisa. Yonke into esimele siyenze ibukeka kwileta yokuqala yegama ngalinye. Iparameter ilinganisa into ebantwini, kwaye i-statistic imisela into ethile kwisampuli.
Imizekelo yeParameters kunye nezibalo
Ngezantsi kukho umzekelo omnye weeparitha kunye neenkcukacha:
Masithi sifunda inani labantu kwi-Kansas City. Ipharamitha yolu nani iya kuba yindalo ephakamileyo yazo zonke izinja kwisixeko. I-statistic iya kuba yindalo ephakamileyo yeenja ezi-50.
Siza kuqwalasela ukufundwa kwabadala abakhulileyo esikolweni eUnited States. Ipharamitha yalolu luhlu lulucalulo oluqhelekileyo lwemilinganiselo yamanqanaba ebakala abo bonke abakhulile esikolweni esiphakeme. I-statistic yindlela yokuphambukiswa okuqhelekileyo kwimilinganiselo yamanqanaba ebakala yesampula yabadala abakhulileyo be-1000.
Sicinga ukuba bonke abavoti banokukhetha ukhetho oluzayo. Kuya kuba neprogram yokuvota ukutshintsha umgaqo-siseko wombuso. Sinqwenela ukufumanisa izinga lokuxhaswa kweli phulo lokuvota. Ipharamitha, kule meko, yimalungu yabemi abavoti abanokuthi baxhase iqela lokuvota. I-statistic ehambelanayo yinxalenye ehambelana nesampula yabavoti abavakalayo.
Ulwabiwo olunjani lokuHlulwa kweBinomial?
Ukwahlukana Phakathi kwe-Extrapolation kunye nePolitiki
Indlela yokubala i-Mean, iMedian kunye neMode
Yintoni Eyona Binomial?
Ziziphi iingxube zeenyosi?
Uluphi Ulwimi Oluvela Kulo? (Iingcamango)
Iingenelelo zeBore Bouled When Hunting
Amagugu kaRhulumente aseburhulumenteni
Ixesha lokusebenzisa "Liang" ngokuchasene ne "Er" ngesiTshayina
Iibhaktheriya kunye noTyhefu lokutya
'I-Alice kwiWonderland' Iingcaphuno Zokukwenza Ucinga Ngobomi
I-Classic ye-Sidney Poitier Movies
Isikolo sesiFrentshi Isigama
Isingeniso kwiintlobo zempembelelo
Yiyiphi iSithili sokuBhaliswa kwabakwaSensus?
Phakamisa uThixo weGrike
IMfazwe Yehlabathi I
Indlela yokufumana umyalelo woKhuseleko
Indlela Yokufumana Iimvumi Zomculo Welizwe
I-Mohs Hardness Scale